सडन डेथमा बिराटनगरलाई पाखा लगाउँदै दुधे सेमिफाइनल प्रबेश - निरन्तरखबर
सडन डेथमा बिराटनगरलाई पाखा लगाउँदै दुधे सेमिफाइनल प्रबेश
२०७७ माघ १०, शनिबार , निरन्तर खबर, ९८२ पटक पढिएको
खेलकुद ताजा समाचार प्रदेश नं. १ मुख्य समाचार समाचार
पथरी, मोरङको पथरी शनिश्चरेमा जारी ५ औँ रिफ्युजी च्यालेन्ज कपमा बिराटनगर फुट्बल क्लवलाई हराउदै दुधे फुट्बल क्लव सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
निर्धारित समयमा १–१ को बराबरी खेलेपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो । टाइब्रेकरमा पनि बरबरी भएपछि सडन डेथ मार्फत दुधेले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्‍यो ।
दुवै टिमले पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी खेले । खेलको ४३ औँ मिनेटमा बिराटनगरका ११ नं. जर्सीका आशिस चौधरीले गरेको उत्कृष्ट प्रहारले जाली चुमेको थियो । करिब ३० यार्ड टाडाबाट गरेको चौधरीको प्रहार गोलमा परिणत हुँदा १–० गोल अन्तरले बिराटनगर अघि बढेको थियो । यसपछिका थुप्रैवटा प्रहारहरुले गोल पोस्टको दिशा लिन नसक्दा अन्ततः खेल बराबरीमा समाप्त भएको थियो ।
खेलको ६६ औँ मिनेटमा दुधेका जसी नं. ४ का सनम राईले रिटर्न बल मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेर टिमलाई बराबरीको नतिजामा ल्याए । दुधेले पाएका थुप्रै अवसरलाई सहि सदुपयोग गर्न नसक्दा जितका लाडि सडन डेथसम्म कुर्न बाध्य भयो ।
सडन डेथमा बिराटनरका अशोक खवासले गरेको गोलले जाली चुम्न सकेन। यता दुधेका गोल रक्षक सन्दिप लिम्बुले गरेको प्रहारले जाली चुमेपछि नतिजा दुधेले आफ्नो पक्षमा पारेक्क थियो ।
आजको खेलको म्यान अफ दि म्याच दुधेका सनम राई घोषित भए । राईले २ हजार ५ सय रुपैया र मेडल प्राप्त गरे । प्रतियोगीताको बिजेताले नगद १ लाख १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता टोलि ५१ हजार रुपैयाँ पुरस्कारमा सिमित रहने छ ।
मोरङको पथरी शनिश्चरेमा अवस्थित भूटानी शरणार्थी शिविरका सक्रिय युवाहरुको समूह यूथ फ्रेन्ड्ली सेन्टरको मुख्य आयोजनामा प्रतियोगीता संचालन भइरहेको छ। प्रतियोगीता संचालनका लागि सेक्टर आई परिवारको मुख्य सहयोग रहेको छ ।
भोलीको खेल आयोजक ए टिम र टेन नवोदय बिच हुने आयोजक कमिटिले जनाएको छ । प्रतियोगीताका सम्पूर्ण खेलहरु पथरीशनिश्चरे १० मा रहेको पथरी शनिश्चरे रंगशालामा आयोजना भईरहेका छन् ।
बम भेटिए सगै पुर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्द
लर्ड बुद्धले ग¥यो ज्येष्ठ सदस्यलाई आजीवन पेन्सन वितरण
महिला एसियन कप खेल्नबाट नेपाल वञ्चित
२०७८ आश्विन ५, मंगलवार , निरन्तरखबर , ३९ पटक पढिएको
देशभर थप १ हजार ३ सय ३० जनामा कोरोना पुष्टि
२०७८ आश्विन ५, मंगलवार , निरन्तरखबर , २८ पटक पढिएको
सुनसरीमा हात्तीको आक्रमणमा परि महिलाको मृत्यु
२०७८ आश्विन ५, मंगलवार , निरन्तरखबर , ४२ पटक पढिएको
२०७८ आश्विन ५, मंगलवार , निरन्तरखबर , ४५ पटक पढिएको
बेलबारीका व्यवसायी तथा सामाजिक व्यक्तित्व मोहन सिवाको निधन
२०७८ आश्विन ५, मंगलवार , निरन्तरखबर , १६८ पटक पढिएको